Wararka Maanta: Sabti, Dec 29, 2012-Dab geystay khasaare isugu jirta naf iyo maal oo kacay deegaanno ka tirsan Degmada Maxaas ee Gobolka Hiiraan
Guddoomiyaha degmada Maxaas ee dowladda Soomaaliya Muumin Max’ed Xalane ayaa isaga oo ku sugan magaalada Baladweyne waxaa warbaahinta uga warbixiyay dab-ka iyo khasaaraha ilaa hadda la og-yahay ee ka dhashay.
Waxaa uu sheegay guddoomiyaha in dabku uu kacay dhul keymo ah oo ay ku noolaayeen dad reer miyi ah, isaga oo intaa ku darray xiriir uu la sameeyay dadka ku dhaqan deegaannadaas u sheegeen in ay jiraan dhamashada dad iyo duunyo intaba sidoo kalana dabku uu baabi’iyay aqlo ama guryo ay dhowr ah oo ay degnaayeen dadka reer miyiga ah.
‘’Runtii dhul ballaaran ayuu ku fiday dabka dhimashada caruur waa naloo sheegay inkastoo aynu tiro rasmi ah ilaa iyo hadda heynin, sidoo kale tiro xoolo ah oo dabka ku dhintayna waa ay jiraan, saacado badan ayuu dabku socday inkastoo hadda la damiyay,’’ ayuu yiri,’’ guddoomiyaha degmada Maxaas ee dowladda Soomaaliya.
Ilaa iyo hadda lama garanayo sababta rasmiga ah ee uu ka dhashay dabka, hasse ahaatee dadka reer miyiga ah waxaa caado u ah marka la gaaryo xiliyada habeenkii ay shitaan dab si loo ogaado in goobtaasi reero degan yihiin, waxaana suuragal ah in dabeysha xiliyada habeenkii soo dhacda sahashay in uu dabku qabsado dhulka keymaha ah.
Degmada Maxaas ee gobollka Hiiraan waxaa hadda maamulkeeda gacanta ku haya kooxda Al-shabaab oo ilaa iyo hadda wax war ah ka soo saarin dabka la sheegay in uu ka kacay deegaannada hoos taga degmada.